Sida Loo Iibiyo Amazon: Hagaha Ugu Dambeeya
Tilmaamaha ugu dambeeya ee ku saabsan sida loogu iibiyo Amazon
Jimco, Juun 7, 2017 Axad, Disembar 24, 2017 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan la kulannay wax weyn wadahadal lala yeesho Randy Stocklin on our Podcast. Randy waa khabiir ku takhasusay cilmiga ganacsiga kaas oo aasaasay shirkad la yiraahdo One Click Ventures, oo ah shirkad iska leh seddex warshadood oo waaweyn oo warshadaha muraayadaha indhaha ah. Hal mowduuc oo aan taabannay wuxuu ahaa muhiimadda ay leedahay in wax lagu iibiyo Amazon.
Iyada oo ay gaaritaankeeda cajiibka ah, Amazon waa in aan waligeed loo diidin iyada oo loo adeegsanayo iibinta iyo qaybinta mid ka mid ah alaabadaada. Faa’iido darrada aan lahaanshaha xiriirka aad la leedahay macmiilkaaga ayaa aad uga culus mugga iibsadayaasha Amazon. Xaqiiqdii, Amazon waxay soo jiidataa in ka badan 150 milyan oo booqasho bishii.
Furaha ayaa ah inaad adeegsato hageyaal sida kan oo kale ah si aad wax badan ubaratid, garaacdo tartankaaga, iskana ilaaliso inaad lacag ku khasaarto khaladaadka nacasnimada ah. Suuqa runti waa tartan, iyo inbadan oo aad ogtahay, ayaa sifiican u qalabaysan waxaad noqon doontaa inaad ka guuleysato tartanka. Ron Dod, Visiture
Booqasho waa wakaaladda Suuqgaynta Raadinta eCommerce oo ay isla meel dhigeen Tilmaamaha ugu dambeeya ee Amazon Domination, Maqaal aad u qoto dheer oo qoto dheer oo kaliya oo ku saabsan faahfaahin kasta oo aad u baahan tahay inaad go'aansato sida aad ugu iibinayso Amazon, go'aamada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad sameyso, iyo sida loo bilaabo.
Qorshaha Iibinta Amazon - go'aamiso inaad rabto inaad noqoto shaqsi iibin ama iibiya xirfadle ah.
Khidmadaha Iibiyaha Amazon - dhammaystirka, rarka, xidhitaanka, iyo u diritaanka khidmadaha dhammaantood waa la adeegsan karaa markay wax ku iibinayaan Amazon.
Fulinta - Fulinta Amazon (FBA) ama Fulin Cilad Ganacsi (MFN) ayaa ah ikhtiyaarrada alaabadaada ugala soo bixi karto bakhaarka ilaa albaabka.
Xulo Alaabtaada - Waxaa laga yaabaa inaadan rabin dhammaan alaabadaada Amazon, sidaa darteed faahfaahinta qaar ayaa la bixiyaa sida ugu wanaagsan ee loo doorto alaabooyinka aad rabto inaad ka hesho halkaas.
Samee Alaabadaada - Waa hal shay in la daabaco badeecad, mid kalena in si dhab ah loo helo si loogu muujiyo raadinta oo loo helo xoogaa iib ah. Tilmaamaha waxaa lagugu siinayaa macluumaadkan.
Dhiirrigelinta in la bilaabo?
Bilow Iibinta on Amazon
Tags: Amazonamazon ecommercelacagaha amazonfulin amazonkhidmadaha gudbinta amazonkhidmadaha iibiyaha amazonqorshooyinka iibiyaha amazonujrada maraakiibta amazonamazon variable khidmadaha xiritaankafbadhammaystirka amazonsida loo iibiyo amazonGanacsi Fulay Shabakadmfn